တစ်လအတွင်း ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ မိုးယံဇွန်
တစ်လအတွင်း ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ မိုးယံဇွန်
2 Aug 2018 . 11:35 AM
မိုးယံဇွန်ကတစ်လအတွင်း သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကို ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ အခုလိုတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အစားအသောက်ကိုလည်း ထိန်းရသလို Gym ကစားတာတွေကိုလည်း အခုလိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။
gym မဆော့ဖြစ်လို့ body ကပုံပျက်သွားတာ
လိုချင်တဲ့ muscle type ကို gym မှာ
Htoo Aung နဲ့ အလောင်းအစား လုပ်ပီး
ရက်၃၀ အတွင်း အပြင်းစားလေ့ကျင့်ခန်း နဲ့
အခုတော့ #narzbambam အဲလိုတွေဖြစ်သွားပီ
ဘယ်လိုလဲ!!!!!????” ဆိုပြီးတော့ မိုးယံဇွန်က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Gym မဆော့ဖြစ်တာကြာလို့ ခန္ဓာကိုယ်က ပုံပျက်သွားပေမယ့်လည်း ရက် ၃၀ အတွင်းမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ ဆော့လိုက်ရင် ဒီလိုပုံစံမျိုး ပြန်လည်ရရှိနိုင်တဲ့ အတွက် Gym ကစားသူတွေလည်း စိတ်ဓါတ်ခွန်အားရရှိနိင်စေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit: Zay Khine Myint Swe Facebook
တဈလအတှငျး ခန်ဓာကိုယျပုံစံပွောငျးလဲနိုငျခဲ့တဲ့ မိုးယံဇှနျ
မိုးယံဇှနျကတဈလအတှငျး သူ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျပုံစံကို ပွောငျးလဲနိုငျခဲ့တာနဲ့ပတျသကျလို့ အခုလိုတငျထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ အစားအသောကျကိုလညျး ထိနျးရသလို Gym ကစားတာတှကေိုလညျး အခုလိုလုပျဆောငျခဲ့တာဖွဈတယျလို့ ရေးထားပါတယျ။
gym မဆော့ဖွဈလို့ body ကပုံပကျြသှားတာ
လိုခငျြတဲ့ muscle type ကို gym မှာ
Htoo Aung နဲ့ အလောငျးအစား လုပျပီး
ရကျ၃၀ အတှငျး အပွငျးစားလကေ့ငျြ့ခနျး နဲ့
အခုတော့ #narzbambam အဲလိုတှဖွေဈသှားပီ
ဘယျလိုလဲ!!!!!????” ဆိုပွီးတော့ မိုးယံဇှနျက သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျမှာတငျထားတာဖွဈပါတယျ။
Gym မဆော့ဖွဈတာကွာလို့ ခန်ဓာကိုယျက ပုံပကျြသှားပမေယျ့လညျး ရကျ ၃၀ အတှငျးမှာ ပွငျးပွငျးထနျထနျနဲ့ ဆော့လိုကျရငျ ဒီလိုပုံစံမြိုး ပွနျလညျရရှိနိုငျတဲ့ အတှကျ Gym ကစားသူတှလေညျး စိတျဓါတျခှနျအားရရှိနိငျစဖေို့ ဖျောပွပေးလိုကျတာဖွဈပါတယျ။